JINGHPAW KASA: ဗမာအစိုးရမှ ဘုရားကျောင်းဆောက်လုပ်ခွင့် ပိတ်ပင်
အောက်တိုဘာ (၁၀) ဗုဒ္ဓဟူး
ဗမာအစိုးရသည် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ်ခမ်းအနီး နမ်ဂျန့်၊ ဘန်လုံကျေးရွာမှ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခါနီး ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကြောင်းကို ဆက်လက်ဆောက်လုပ်ခွင့် လာရောက်ပိတ်ပင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် နမ်ခမ်းမှ မြို့နယ် သာသနာရေးမှူး သန့်ဇင် မှ ဘန်လုံကျေးရွာတွင် ဆောက်လုပ်လျက်ရှိသော ဘုရားကျောင်းကို ဆောက်လုပ်ခွင့်လာရောက်ပိတ်ပင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
မြန်မာပြည်အစိုးရ (၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေ အပိုဒ် (ဃ) ၃၅၄-၃၆၀ တွင် မြန်မာပြည်တွင် မည်သူမဆို ကိုယ့်ယုံကြည်ရာကို လွှတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်နှင့် တားဆီးပိတ်ပင်ခွင့် မရှိကြောင် အတိအလင်း ပါရှိသော်လည်း ဗမာအစိုးရမှ ယခုကဲ့တို့ တိုင်းရင်းသားများ၏ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကို တားဆီးပိတ်ပင်လျက် ရှိကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ ဤလုပ်ရပ်သည် ဗမာအစိုးရမှ တိုင်းရင်းသားများအပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ချိုးဖောက်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် သိရှိရပါသည်။
မူဆလင် ဘာသာ ၀င်များဖြစ်ကြသော ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာတောင်မပြီးသေးဘူး ပြဿနာ နောက်တစ်ခုထပ်စနေပြီ။ဗုဒ္ဓဘာသာအရပြောရမယ်ဆိုရင် စနေဂြိုဟ်အမျိုးတွေပေါ့။သြော် ဗမာ ဗမာ....
If U Thein Sein & Military government leaders really want cease fire with KIA and allies, he shoul publicly announce "president order to retreat burma tatmathaw from KIO/A territory within one or2week". The cease fire will come surely if the military heed and follow Mr. president's order accurately. The peace will come to Union of Myanmar step by step followed by the succeeding process of negotiations and all national parties meeting(current government leaders, NLD party leaders, others ethnic political parties including 88 generations group and KIO leaders) on the basis of Panglong agreements.
Jing hpaw Christian ni hpe mare nni ai rai nga ai. Tsa Danahpyen luk suk ni re majaw Tara nlang ai nialam hku sha htum mat na re.
အပေါ်ဆုံးကcomment ကောင် ပြသနာကဘယ်သူလဲဘုရားကျောင်း
မင်းမှာဦးနှောက်မရှိဘူးလား ပညာမတတ်ဘူးလား ဘာမူဆလင်အမှုနဲ့ 
နှိုင်းစရာလား သောက် မင်းလိုကောင်မျိုးတွေရှိလို့ဗမာပြည်လား မြန်မာ
ပြည်လား မတိုးတက်တာ ဘုရားကျောင်းဆောက်တာက လူသတ်နေလို့ 
နှိုင်းစရာရှားနေလား ဟေ့ကောင် မင်းတို့ လို လူမျိုးစကားနဲ့ ငါမဆဲတတ်
လို့ မင်းသက်သာတယ် မှတ် နေရာတကာ အာဏာပြချင် တိုင်းရင်းသား
တွေကို ဖိနှိပ် မူဆလင်ကမင်းတို့ နဲ့ အမျိုးတော်တာကောသိလား
သိချင်ရင် အိန္ဒိယ သမိုင်းမှာ သွားလေ့လာချည်